မီးရထားကဏ္ Le ဦး ဆောင်သည့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများသည်ကိယက်ဗ်မြို့တွင်စုရုံး | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
[31 / 10 / 2019] ပါကစ္စတန်ရှိခရီးသည်တင်မီးရထားတစ်စင်းအားလောင်ကျွမ်းခြင်း .. ! 65 သေပြီ	92 ပါကစ္စတန်
[31 / 10 / 2019] အန်ကာကာတွင်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားမတော်တဆမှုစွဲချက်တင်ခြင်း	06 တူရကီ
[31 / 10 / 2019] Konya Eskisehir မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလက်မှတ်စျေးနှင့်လမ်းကြောင်းမြေပုံ	26 Eskisehir
[30 / 10 / 2019]3လေယာဉ်ကွင်းတွင် 2020 လေယာဉ်ပြေးလမ်းဆောက်လုပ်ခြင်းကိုပြီးစီးလိမ့်မည်။	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[30 / 10 / 2019] မြန်နှုန်းမြင့်ရထားပေါ်တွင်လက်မှတ်စျေးနှုန်းများအတွက်ခွဲခြားခြင်းအစီအစဉ်	06 တူရကီ
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး58 Sivasမီးရထားကဏ္ading ဦး ဆောင်သည့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများသည်ကိယက်ဗ်မြို့တွင်စုရုံးခဲ့ကြသည်
18 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 58 Sivas, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, လှိမ့်စတော့ရှယ်ယာ, အထွေထွေ, Institute, ခေါင်းစီးသတင်း, TÜDEMSAŞ, တူရကီ, ကုနျတှဲ 0
ရထားလမ်းကဏ္ leading ကို ဦး ဆောင်နေသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများသည်ယူကရိန်း၊
Özdemir'leပါဝင်သူကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုများအားဖြင့်အတူတကွပူးပေါင်းကြောင်းတူရကီမီးရထားစက်များစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Inc ကို (TÜDEMSAŞ) အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူး Mehmet Basoglu, railexpo အတွက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဌာနမှူးZühtüÇopurနှင့် Wagon ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ Manager ကို Feridun ကဏ္ဍအတွက်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအကဲဖြတ်။
ZEhtüÇopurသည် RailExpo 2019 နယ်ပယ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောအင်တာဗျူးတွင်တင်ဆက်ခဲ့ပြီး Sivas ရှိလက်အောက်ခံစက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် TUDEMSAS ၏အခန်းကဏ္ about နှင့်ပတ်သက်ပြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသင်တန်းသားများကိုပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုအခမ်းအနားတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံရှိစံရထားလမ်းနှင့်အမေရိကန်ဓနသဟာယနိုင်ငံ၏ကျယ်ပြန့်သောမီးရထားလမ်းအကြား bogie များအပြန်အလှန်လဲလှယ်ရေးကိုလှည်းမောင်းနှင်ရန်အစီအစဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီအီတလီနိုင်ငံမီးရထားကုမ္ပဏီနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ခဲ့ကြောင်းတူရကီ Direction အဖွဲ့ 29 / 11 / 2016 တူရကီမီးရထားနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သောရှုထောင့်အီတလီနိုင်ငံကုမ္ပဏီနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ခဲ့သည်: တူရကီရထားလမ်း (Anatolian မီးရထားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များ Cluster) အားလမ်းပေးခြင်း ARUS, TCDD, TÜDEMSAŞ, TÜVASAŞTÜLOMSAŞ, ASELSAN, SAVRONIK နှင့် SANCAR Consulting ကုမ္ပဏီတစ်ခုကအီတလီ ...
Eldener, ကျောင်းသားများနှင့်အတူ3။ လေဆိပ်နှင့် Air Cargo စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Panel ကို၏အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ့ဆုံ 06 / 03 / 2018 ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Service Providers UTIKAD အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအစည်းအရုံး, တူရကီအတွက်တိုးတက်လာသောထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးယဉ်ကျေးမှုပန်းတိုင်ဆီသို့ဦးတည်အလုပ်လုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဤရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အတွင်းUTİKADသည်အခွင့်အလမ်းတိုင်းထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးသင်တန်းရရှိသောကျောင်းသားများနှင့်အတူတကွကြိုးစားရန်…
တရုတ်အတွက်ရထားလမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် fixed မြို့တော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 2012 630 ဘီလီယံကိုယွမ်ဖွစျလိမျ့မညျ 13 / 10 / 2012 တရုတ်မီးရထားအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကယခုနှစ်တွင်တရုတ်နိုင်ငံရထားလမ်းကဏ္fixed၌အဓိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသည် RMN 630 ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ 99,5 ဘီလီယံ) သို့ရောက်ရှိလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ တရုတ်မီးရထားအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှထုတ်ပြန်သောအချက်အလက်များ…
ရုရှားရထားလမ်းကဏ္ဍတွင်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုမှလာမယ့်နေကြသည် 29 / 06 / 2013 ရုရှားမီးရထားကဏ္sectorတွင်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ၀ န်ကြီးချုပ်မက်ဒီဒက်ဗ်၊ အစိုးရအဖွဲ့ ၀ င်များ၊ ၀ န်ကြီးချုပ် Dmitry Medvedev မှပြောကြားခဲ့သည်မှာအစိုးရသတင်းစာမှထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်
ရထားလမ်းကဏ္ဍတွင်KARDEMİRရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး 02 / 05 / 2014 ရထားလမ်းကဏ္ဍတွင်KARDEMİRရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး: Karabükသံနှင့်သံမဏိအလုပ်လုပ် (Kardemir) မှ General Manager Fadil Demirel တူရကီရဲ့နှစ်ပတ်လည်သံလမ်း၏ 150 တထောင်တန်ချိန် get ကပြောပါတယ်, တိုင်းပြည်လိုအပ်ချက်ကို3ကြိမ်အကြောင်းကိုထုတ်လုပ်ပြောကြားခဲ့့သည်က ... ။
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ကို Maintenance နှင့်ပြုပြင်ခြင်းန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူရေးအဘို့အလျှပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ်များ
31: အောက်တိုဘာလ 14 30 @ - 15: 30
တင်ဒါအသိပေးချက် - နောက်ဆုံးဆေးထည့်သည့်လှည်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲဆောက်လုပ်ရေး (TÜVASAŞ)
ပါကစ္စတန်ရှိခရီးသည်တင်မီးရထားတစ်စင်းအားလောင်ကျွမ်းခြင်း .. ! 65 သေပြီ
3 Multi-storey Istanbul ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏တင်ဒါသည် 2020 တွင်ရှိသည်။
Bursa ရှိအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစျေးနှုန်းများသည်2နှစ်များအတွက်တူညီသောအဆင့်တွင်ရှိသည်
Samsun Tram Times နှင့်လမ်းကြောင်းမြေပုံ
31: အောက်တိုဘာလ 10 00 @ - 11: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Gebze Köseköyလိုင်းအပိုအစိတ်အပိုင်းများပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသည်
တင်ဒါအသိပေးချက် - လျှပ်စစ်စနစ်များကိုပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်း
TCDD4။ ဒေသတွင်းLevelရိယာများတွင်အဆင့်အမျိုးမျိုးဖြတ်ကျော်၏ရော်ဘာ Coating
ကုမ္ပဏီအီတလီနိုင်ငံမီးရထားကုမ္ပဏီနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ခဲ့ကြောင်းတူရကီ Direction အဖွဲ့
Eldener, ကျောင်းသားများနှင့်အတူ3။ လေဆိပ်နှင့် Air Cargo စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Panel ကို၏အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ့ဆုံ
တရုတ်အတွက်ရထားလမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် fixed မြို့တော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 2012 630 ဘီလီယံကိုယွမ်ဖွစျလိမျ့မညျ
ဝန်ကြီး Arslan, အ BTK ရထားလမ်းထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍကိုအထောက်အကူပြုမည်သောဘီလီယံ
Yönverလမ်းတံတားမီးရထားကဏ္ဍ OSTIM ကိုသိမ်းယူပြီး
ရထားလမ်းကဏ္ဍတွင် 11.3 ဘီလီယံကိုပေါင်ခွဲတမ်း
15 22 ဒေါ်လာဘီလျံမီးရထားကဏ္ဍရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Done တစ်နှစ်
ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် TCDD မီးရထားကဏ္ဍ Make
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: အောက်တိုဘာလ 27 1956 Halkalıအဆိုပါခရီးသည်လိုင်း -Sirkec
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ အောက်တိုဘာလ 2019 (598) စက်တင်ဘာလ 2019 (558) သြဂုတ်လ 2019 (509) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (503) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1076) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (971) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (547) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1058) မတ်လ 2013 (1101) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (905) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1167) အောက်တိုဘာလ 2012 (829) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (973) ဇူလိုင်လ 2012 (860) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (562) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (11) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)